“Ozil waxaa lagu heystaa Diintiisa ISLAAMKA,”. -Madaxwaynaha Turkiga Erdogan oo TALEEFAN kala hadlay……!!! – Gool FM
“Ozil waxaa lagu heystaa Diintiisa ISLAAMKA,”. -Madaxwaynaha Turkiga Erdogan oo TALEEFAN kala hadlay……!!!
(Europe) 24 Luulyo 2018. Madaxwaynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu la hadlay Mesut Ozil kaddib markii uu kubbad sameeyaha ka dhawaajiyay inuu ka fariistay xulka qaranka Jarmalka, wuxuuna weeraray hab dhaqanka Isir Faqooqa uu laacibku wajahayo.
Xiddiga Arsenal ayaa Axadii ka dhawaajiyay inuu ka fariistay ciyaaraha Caalamiga ah, usbuucyo kaddib markii uu Jarmalka ku soo haray wareega hore ee Koobka Adduunka.
Ozil ayaa lagu cambaareeyay sawir uu la galay Erdogan ka hor Koobka Adduunka iyo intii lagu guda jiray Doorashadii dalka Turkiga.
Laacibkii hore ee Real Madrid ayaa ku Dhaleeceeyay Madaxa xiriirka kubbada cagta Jarmalka, Taageerayaasha iyo Saxaafadda sida uu u arko Cunsuriyada sida loola dhaqmo dadka asal ahaanta ka soo jeeda Turkiga wuxuuna difaacay la kulankiisii Madaxwayne Erdogan.
‘Dhabtii waa wax aan la aqbali Karin in Nin Yar kaa oo wax kasta siiyay xulka qaranka Jarmalka isla markaana ka qeyb qaatay guusheeda uu wajahayo hab dhaqan Isir Faqooq ah sababo la xiriira Diintiisa Islaamka. ‘ . Madaxwayne Erdogan ayaa sidaa ku waramay mar uu la hadlayay Saxaafadda Turkiga.
AFAR farqi ee u dhexeeya saxiixa cusub kooxda Barcelona Malcolm iyo xidiga Chelsea ee Willian Borges